Tag: nchọpụta | Martech Zone
Njem Mgbasa Ozi Agile
Bọchị Sọnde, Machị 19, 2017 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
N'ime afọ iri nke inyere ụlọ ọrụ aka ịmalite azụmaahịa ha n'ịntanetị, anyị emeela usoro ndị na-eme ka ihe ịga nke ọma sie ike. Ọtụtụ mgbe, anyị na-ahụ na ụlọ ọrụ na-alụ ọgụ maka ahịa dijitalụ ha n'ihi na ha na-anwa ịwụli ozugbo na igbu kama iwere usoro ndị dị mkpa. Mgbanwe Mgbanwe Marketingzụ ahịa Ahịa na-agbanwe agbanwe na mgbanwe dijitalụ. Na nyocha data sitere na PointSource - Imezu mgbanwe mgbanwe dijitalụ - data anakọtara site na ndị na-eme mkpebi 300 na azụmaahịa, IT na isi ihe.
Wenezdee, Jenụwarị 6, 2016 Thursday, January 7, 2016 Douglas Karr
Mgbe ụfọdụ, m na-eche ma ọ bụrụ na m dere otu narị ihe ọzọ gbasara ịgbanwe àgwà ịzụ ahịa, yana ọtụtụ narị isi mmalite data ndị ọzọ, ọ bụrụ na atụmanya ga-amalite ige ntị. O yiri ka ha anaghị ege ntị, n'agbanyeghị. Mgbe anyị nuru na anyị dị iche, anyị mechaa nyocha, anyị na-ahụ otu ihe. Omume ịzụ ndị ahịa na-agbanwe. Mgbanwe ahụ adịghị nwayọ na mbụ, mana ugbu a ọ na - aga n’ihu. Afọ iri na ise gara aga, n'ime ndị ọbịa 10 - 1 ma ọ bụ 2